Allgedo.com » 2017 » February » 14
Home » Archive Daily February 14th, 2017
Dagaaladii ka socday agagaarka Dheeka-Suftu oo qaboobay iyo Oromadii oo dib loo riixay
Dheeka-Suftu, Liibaan (AOL) – Dagaaladii ka socday deegaano ku dhow degmada Dheeka-Suftu ee gobolka Liibaan ee dhulka Dowlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya (DDSI) ayaa galabta yara qaboobay kaddib markii ey xoogagga difaaca Soomaalida dib u riixeen meleeshiyaadkii Oromada ee uu hadafkoodu ahaa in ey qabsadaan dhul aanay laheyn. Dagaalka oo saddex goobood ka bilowday aroornimadii hore ee...
Munaasabad lagu soo dhaweynayay doorashada madaxweyne Farmaajo oo ka dhacday magaalada Phoenix USA
Phoenix, Az (AOL) – Munaasabad lagu taageerayay Madaxweynaha la doortay ee Soamaaliya Mudane Maxamed Cabdulahi (Farmaajo) oo ka dhacday Phoenix Arizona USA. Munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo ay ka qeybgaleen aad u faro badan, isla markaana lagu taageerayay dowladda cusub ee Soomaaliya ayaa ka dhacday magaalada Phoenix ee dalka Mareykanka. Munaasabaddan ayaa waxaa ka hadlay dad aad u badan...
Dagaal qaraar oo mar dhow ka bilowday deegaano u dhow degmada Dheeka-Suftu
War deg-deg ah oo hadda naga soo gaaray degmada Dheeka-Suftu ee gobolka Liibaan ee dhulka Ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa waxuu sheegayaa in subaxnmadii hore ee saaka oo Talaado ah ey maleeshiyaad huwan ah oo ah kuwa Oromada ey saddex jiho kasoo weerareen degmada Dheeka. Deegaanada ey maleeshiyada Oromada weerarka qaawan ee gardarada ah kusoo qaadeen ayaa waxay kala yihiin: Agagaarka Buunda Qarab-qarab...